Home - Zulu | Sojila
Zizwe, thinta, hlola futhi ujabulele!
USojila Scenic yinhlangano eyasungulwa ngonyaka ka-2018 ngesisusa esihlukile sokususa imcabango yabantu futhi uyisuse esikhundleni ngesipiliyoni esisebenzayo. Njengoba sinabasebenzi abanolwazi emikhakheni yobuholi, yokushayela neyolwazi lwemvelo, siyaziqhenya ngokusabalalisa izinsizakalo.
Inhlangano eguquguqukayo kakhulu futhi esekelezelwa insizakalo enikezela izinkambo ezenziwe ngomshini futhi ihambisane nokuhamba ngakunye kuzidingo kanye nokulindelwe yilowo nalowo mhambi, kusuka eKapa kuye kulo lonke elaseningizimu ne-Afrika, kubandakanya iNamibia, iBotswana, iZimbabwe ne-Eswatini.
Ilungele bonke ubuzwe, kuqala ngabendawo ngezilimi ezahlukahlukene, amasiko nezifundazwe, ngaphezulu kwezingane kuze kufike kubantu asebekhulile bayo yonke iminyaka nezifundazwe. Sakha futhi nokuhamba okungavimbeli! Kuhanjelwa izinkambo zezinhloso ezikhethekile njengokujabulisa okwenziwe ngobunyoninco, ukucula, ezemidlalo, abalindi bezinyoni nokunye okuningi.
Ubukhulu bohambo lwezinsuku eziyishumi nesishiyagalolunye kanye nokuvakasha okuncane kosuku okuxuba imvelo, indawo, amasiko kanye nokuhlola yilokho esikwenza kahle.
Umgomo wethu oqondisayo ukwanelisa wonke umuntu ohamba ngaphezulu ohlangothini olungokoqobo kunokugwinya futhi amukele umbono.
Isiqubulo sethu - kusuka Siphume ezi ncwadini!